Mabhuku akanakisa ezana ramakore rechiXNUMX | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku akanakisa ezana ramakore rechiXNUMX
Yakacherechedzwa nezvikamu zvezvakaitika kare zvaizotsanangura mamireniyumu azvino, iro ramakore rechimakumi maviri raive kuputika kwemazita emanyoro akagadziriswa nekusunungurwa kwenyaya dzekare, kuwanikwa kwemhando nyowani dzekutaura uye nenguva yakavezwa mumapeji eimwe yeakanyanya kunaka inotamba. Iyi sarudzo ye mabhuku akanakisa ezana ramakore rechiXNUMX inova muenzaniso wakanakisa.
1 Ulysses, naJames Joyce
2 Mukutsvaga Nguva Yakarasika, naMarcel Proust
3 Mazambiringa eKutsamwa, naJohn Steinbeck
4 Ana Frank dhayari
5 Muchinda Muchinda, naAntoine Saint-Exupéry
6 Lolita, naVladimir Nabokov
7 Makore Mazana Ekusurukirwa, rakanyorwa naGabriel García Márquez
9 Kuuraya Mockingbird naHarper Lee
10 Harry Potter uye dombo reMuzivi naJK Rowling
Yakashandurwa kuita kutsamwiswa kwemutsoropodzi uyo kwemakore akapatsanurwa, Joyce's Ulysses anotaura nezve zana, reimwe nguva, revanhu vane hunyengeri vanofamba mumigwagwa yeDublin vachitsvaga mhinduro. Nyaya dze Leopold Bloom naStephen Dedalus vanogona kunge vari vemunyori mumwechete ane chimiro chemukati chemukati chinoratidzira chikamu cheiri basa rinotora zita raro kubva kumupragonist weHomer's Odyssey senzira yekugadzirisa nyaya dzisingagumi kune nguva nyowani, dzaida mamwe maonero. Inofungidzirwa nevakawanda se bhuku rakanakisa rakanyorwa muChirungu yezana ramakore rechiXNUMX, Ulises yakakonzera chiitiko chetsika muchimiro chevashanyi migwagwa uye mhemberero dzegore rino kuwedzera kuwedzera nhaka yebasa.
Mukutsvaga Nguva Yakarasika, naMarcel Proust
Yakagadzirwa na zvikamu zvinomwe zvakanyorwa naProust pakati pa1908 na1922 (vatatu vavo mushure mekufa), Mukutsvaga kweNguva Yakarasika inotaura nezve nguva, iyo yaMarcel, jaya rine hunyanzvi hukuru rinotsvaga kuve munyori uye rinobva munzira yakasimbiswa kutsvaga mapato uye bonde. Chiratidziro chinosanganisira mareferensi ekutanga ekongiri kune ungochani mumabhuku uye hukuru hwechikadzi hunoderedza hunhu kuchimiro chisina kujairika, ichiumba rimwe remabasa akakurisa ezana ramakore rechiXNUMX.
Mazambiringa eKutsamwa, naJohn Steinbeck
Mukundi we pulitzer mubairo uye basa rinogona kutsanangura nguva yakadai seKuderera Kukuru Kwezvinhu, Mazambiringa eHasha, rakaburitswa muna 1939, ndeimwe yeiyo mabasa makuru ezvinyorwa zveAmerica. Rwendo rwemhuri yaJoad, yakamanikidzwa kutama kubva kuK Oklahoma kuenda kuCalifornia mushure mekuona nyika yavo ichitorerwa, inova mufananidzo wenguva yakatarwa nekusaenzana kweupfumi uye kukanganisika tarisiro yeramangwana. Yese yakasarudzika.
Mabhuku mashoma ave achikwanisa kutaura chokwadi kubva kugehena pachayo; ndoda musikana ane makore gumi nematatu akamborota nyika iri nani. Anne Frank nemhuri yake, vese maJuda, akatiza hutongi hweNazi nekuhwanda mudenga remba yekare yekuchengetera muAmsterdam kubva muna Chikumi 12, 1942 kusvika Nyamavhuvhu 1, 1944, zuva ravakawanikwa uye vakaendeswa kumisasa yevasungwa. Yakareba nguva iyo iyo mudiki Frank akanyora mamiriro ake, chiratidzo chake chenyika uye hupenyu hwaaive achiri kufanira kuona mudhayari raizonunurwa nababa vake, iye ega akapona padambudziko.
Muchinda Muchinda, naAntoine Saint-Exupéry
Aviator uye munyori, Saint-Exupéry akafemerwa nekumhara murenje reSahara kuti ataure nyaya yemutyairi wemotokari anomhanyira mukomana mutsvuku akapukunyuka kubva kune asteroid inotyisidzirwa nekuvapo kwembaobabs. Rwendo rwupfupi asi rwakasimba rweMudiki Muchinda rwakashanda kutsvaga madimikira akasiyana epasirese nyika isina kukwana apo gava iro raida kutsvaga kudzidziswa kana muzvinabhizimusi akaverenga nyeredzi raimiririra chokwadi chiripo nanhasi. Nguva isingagumi uye yakakosha kune vadiki nevakuru.
Lolita, naVladimir Nabokov
Pakaburitswa nyaya yekushushikana kwemudzidzisi wepfungwa nemwanasikana wake anegumi nemaviri ekuberekwa muna 1955, nyika yakapenga nehasha uye ma censors akaridza mhere. Nekufamba kwenguva, munhu wese aizoona mhando ye iro rinozivikanwa basa reRussia Nabokov, hwaro hwekunzwisisa psychopathy yenzanga uko hunhu uye hunhu zvinowanzo dzivirirwa nechishuwo chisinganzwisise mazera kana hukama.
Makore Mazana Ekusurukirwa, rakanyorwa naGabriel García Márquez
Pakati pemwedzi gumi nemasere yekutambudzika nedambudziko rezvehupfumi, Colombian Gabriel García Márquez akanyora ari kuMexico City iro bhuku raizo shandura Latin America zvinyorwa zvachose. Rakadhindwa muna 1967, Makore Mazana Ekusurukirwa ari iyo inonyanyisa kukurudzira nhoroondo yevaSpanish yezana ramakore rechiXNUMX kwete chete yekusimbisa kubviswa kweiyo Latin American boom yemakumi matanhatu uye mashiripiti echokwadi aripo mumigwagwa uye mavara eguta rakarasika reMacondo, asi nekuda kwechando nhoroondo yekondinendi yese pakati pemapeji ayo nekusingaperi.
Nhema Mirror, Iyo Yemusikana ... dystopia Yakapinda muhupenyu hwedu muchimiro chemafirimu, akateedzana uye mabhuku ane chikwereti chemifananidzo yavo ku1984, inoverengeka naGeorge Orwell yakaburitswa mumakore mashoma mushure meHondo Yenyika II umo pasi rose rakatanga kufunga zvikonzero zvezvakaipa zvaro nemhedzisiro yavo. Gara mune ramangwana England uko mukoma inodzora hupenyu hwevagari vayo vese, fungidziro ya1984 iri kutonhora sezvazviri kana tikaongorora mafambiro enguva dzazvino umo kutonga kunotanga nefoni yakapusa.
Kuuraya Mockingbird naHarper Lee
Yakashandurwa ikava inoverengeka inonyanya kuverengwa nezverusarura rwezana ramakore rechiXNUMXKuuraya Mockingbird naHarper Lee, rakaburitswa muna 1960, inyaya yechinyorwa chakashanda kunzwisisa nhoroondo yemadzinza eUnited States isina kugadziriswa zvachose. Kubudikidza nemeso ababa vake, Atticus Finch, murondedzeri wemutambo uye mudziviriri wemurume mutema anopomerwa kubata chibharo mukadzi muchena panguva yeKushushikana Kukuru, mudiki Scout Finch anova change ego kubva kumunyori anoziva ichi chokwadi kwenguva yakareba sezvaanogona kurangarira. Muna 2015, chikamu chechipiri chakanyorwa pamberi peKilling a Mockingbird pachayo chakaburitswa pasi pezita Enda unonyorera murindi.
Harry Potter uye dombo reMuzivi naJK Rowling
Zvishoma, kana pamwe hapana, zvinyorwa zvekuverenga zvinogona kuyerwa neizvo zvinokonzerwa ne iyo saga yemukomana wizard Harry Potter uye adventures ake paHogwarts Chikoro cheUroyi neWizardry. Basa rekutanga, rakaburitswa muna 1997 kubva pane zvinyorwa zveamai vadiki vakarambana uye vasina basa, Harry Potter uye neRuzivo Philosopher, rakava iro quintessential kuyaruka boom iro raizotungamira kune mamwe mabhuku matanhatu (kusingaverenge Harry Potter uye iyo nhaka yakatukwa) iyo yakazara kukosha yakakwira kusvika pamadhora gumi nemashanu emadhora muna 15.
Ndeapi, mukufunga kwako, iwo akanakisa mabhuku ezana ramakore rechiXNUMX?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku akanakisa ezana ramakore rechiXNUMX
Luis Portalanza akadaro
Haisi yakakomba, - sekunyadziswa kweumwe munhu-, uye inotinyomba isu, vaverengi; "mutsoropodzi wezvinyorwa," anonyora akanakisa mabhuku eS20; Izvi zvinosanganisira kubiridzira sezvazviri mukutarisa mune zvinyorwa zvinyorwa zvevanhu, hunyengeri hwezvavanoti "dhayari raAnn Frank", hunyengeri hwakagadzwa zvakapetwa kazana nezviuru zvisinga tsoropodzwa. Inoshaya chero hunhu hwekuiratidzira se "bhuku" kana sebasa rekunyora sezvo isina kukosha kwekunyora. Iri "basa" rinongotarisira pasi kusahadzika kukosha kwevamwe vataurwa uye vanozviita zvisirizvo nekuzvienzanisa neizvo zvakanyorwa nevamwe vese vanyori vechokwadi "mhou dzinoyera" mumitauro yekunyora.
Pindura Luis Portalanza
Ishe Byron. Chiitiko chekuzvarwa kwake. 4 yenhetembo dzake.
Mabhuku akanakisa aIsabel Allende